५० वर्षसम्मको सोचेर विकास गर्छौ : राना « Anumodan National Daily
प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०७४, बुधबार १४:३०
रामसमझ राना, माओवादी केन्द्रका धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर पदका उम्मेदवार
अठार वर्षअघि अर्थात् २०५६ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीमा संगठित भएका रामसमझ रानालाई माओवादी केन्द्रले धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवार बनाएको छ । मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएका ३८ वर्षीय राना प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकामा आदिवासी जनजाति समुदायबाट मेयर पदमा एक्ला उम्मेदवार राना भन्छन्– ‘मैले धनगढी उपमहानगरपालिकाको ५० वर्षपछि सम्मलाई सोचेर दीगो विकासको योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य बनाएको छु ।’ मतदातासामु आफ्ना कार्यक्रमसहित मत माग्न व्यस्त रहेका माओवादी केन्द्रका मेयर पदका उम्मेदवार रानासँग अनुमोदन दैनिकका लागि सहकर्मी मुकेश टेर्रांले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
– एकडेढ महिना अघिदेखि नै उम्मेदवारको टुंगो लागेर तपाईं प्रचारप्रचारमा जुट्नु भएको छ । कस्तो माहोल पाउनु भएको छ ?
चुनावी माहोल ठिक छ । हामीले प्रचारप्रसारका लागि धेरै समय पाएकोले हाम्रो भत्किएको पार्टी संगठन निर्माण गर्ने अवसर पायौं । सबै जनताको घरदैलोमा जाने अवसर पायौं । यसले हामीप्रति जनविश्वास बढेको पाएका छौं ।
– तपाईंहरूलाई मतदाताले किन भोट दिने त ?
किनकि, माओवादी केन्द्रले नै केन्द्रीय सरकारमा निहीत अधिकार नागरिकको गाउँघरसम्म ल्याउन सफल भयो । नागरिकले केन्द्रको अधिकार गाउँघरमा नै उपयोग र प्रयोग गर्न पाउने भएपछि आम नागरिकले माओवादी केन्द्रलाई विश्वास गरेका छन् । त्यसैले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई मत दिन चाहनु स्वागतयोग्य छ ।
– धननगढीको विकासका तपाईंका योजना र एजेण्डा के–के छन् ?
हामी चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा लामो समयदेखि टोलटोलमा घुमेका छौं । धनगढीको मुख्य बजारमा विकास भएको देखिन्छ, तर अलिकति भित्र हेर्दा धनगढी अस्तव्यस्त पाइन्छ । धेरै ठाउँमा डुवानको समस्या रहेको पाइयो । मेरो पहिलो प्राथमिकता धनगढीलाई डुवानमुक्त गर्ने हुनेछ । दोस्रो काम धनगढीलाई सुन्दर शहर बनाउने हुनेछ । हामीले ५० वर्षसम्मको सोचेर र योजना बनाएर धनगढीको विकास गर्नुपर्छ । ठाउँठाउँमा प्लटिङ गर्ने, पीच बनाएको छ महिनामै भत्किने विकास भइरहेका छन् । यस्तो ठेक्कापट्टाबाट धनगढीको विकास हुँदैन । हामीे ठेक्कापट्टा रोक्नेछौं । जनस्तरबाटै विकास गर्नेछौं । बाटो बनाउँदा चौडा र ढलको व्यवस्था गरेर मात्रै पीच गर्नेछौं । त्यस्तै, सेती अञ्चल अस्पतालमा सिटिस्क्यानको व्यवस्था गर्ने र आइसियुको क्षमता बढाएर कम्तिमा १२ शैय्याको पुर्‍याउने तथा क्षेत्रीय अस्पतालमा रूपान्तरण गरिने छ । प्रत्येक वडामा प्रसूतिगृह सहितको स्वास्थ्य चौकी, प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
त्यस्तै, हामी धनगढीमा विजुली, केवल र टेलिफोन लाइन अण्डरग्राउण्ड बनाउने छौं । रंगशालाको स्तरोन्नती र प्रत्येक वडामा खेलमैदान बनाउने योजना छ । त्यस्तै, धनगढीमा टर्मिनल बसपार्क बनाउने छौं । धनगढीका सबै १९ वडामा नगर बससेवा सञ्चालन गर्न रिङरोड निर्माण गरिने छ । अर्कोतिर, मोहना नदीको कटानको ठूलो समस्या छ । मोहना नदीको कटान रोक्नका मोहना किनारामा करिडोर बनाउने योजना रहेको छ । यसले कटान रोक्ने छ, बाटो बन्छ, सीमानाको सुरक्षा हुन्छ र चेलबेटी बेचविखनमा पनि नियन्त्रण हुने छ । त्यस्तै, कृषिको पक्ष छ । म आफैं किसानको छोरा भएकाले यसमा मेरो जोड रहेको छ । सिंचाईंको व्यवस्था गर्न किसानलाई प्रत्येक दुई विघामा एउटा ट्युववेल, कृषि मिटर र मोटरको नि:शुल्क व्यवस्था गर्नेछौं । कम जमीन हुने किसानका लागि समूह सिंचाईंको व्यवस्था गरिने छ । किसानको नाममा आउने अनुदान सही ढंगले किसानसम्म पुर्‍याउने छौं । समयमा मलवीऊ उपलब्ध गराउने छौं ।
त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाभित्र कृषि पकेटक्षेत्र छुट्याएर काम गरिने छ । कुखुरापालन, बाख्रापालन, केरा, आलु, माछापालन, प्याज, बगरखेती लगायतको पकेट क्षेत्र छुट्याएर काम गर्न सकिन्छ । किसानले धेरै उत्पादन गर्न थाले भने उपमहानगरपालिका आफैले कोल्डस्टोर बनाएर किसानको उत्पादन खरिद गर्न सक्छ । त्यस्तै, युवाका लागि आउने बजेटबाट श्रम बैंक खोलिने छ । एक घर, एक रोजगारी नीति लागू गरिने छ । त्यस्तै, अझैं पनि जमीन र लालपुर्जा नपाएका मुक्तकमैयालाई पनि बिजुली दिने व्यवस्था गरिने छ । मुक्तकमैया र सुकुम्बासीमध्ये नि:शुल्क र स:शुल्क जग्गा वितरण गर्ने नीति बनाइने छ । सात नम्बर पर्तिमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने योजना ल्याउने छौं । हामीले नमुना वस्ती बनाएर गरिब बाहुनक्षेत्री, जुनसुकै समुदायका परिवारलाई स्थानीय सत्तामार्फत घर बनाउन सहयोग गरिने छ ।
त्यस्तै, १० कक्षासम्म नि:शुल्क शिक्षा पूर्णरूपमा लागू गरिने छ । हामी नागरिकले तिरेको कर शिक्षामा लगानी गर्नेछौं । उपमहानगरपालिकाले १२ कक्षासम्म नि:शुल्क शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउने छ । त्यस्तै, करको दायरा फराकिलो बनाउने छौं । कर वर्गीकरण गरेर किसानलाई आम्दानीको आधारमा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउने छौं । महिलालाई आत्मनिर्भर बन्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउने छौं । उपमहानगरपालिकाभित्र तत्काल ठूला उद्योग खोल्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले, कैलाली भन्सारलाई अझै व्यवस्थित बनाएर यहाँका उत्पादन निर्यात बृद्धि गर्ने नीति बनाउने छौं । हामी बेहडाबाबा, शिवपुर र जाखौर ताललाई धार्मिक पर्यटनस्थलको रूपमा विकास गर्नेछौं । त्यस्तै, छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न जंगलमा तारबार गररे त्यहाँ राखिने छ । धनगढीलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउन हामीले घुम्ती शौचालय सञ्चालन गर्नेछौं । ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्था गरिनेछ । यसरी हामीले ५० वर्षसम्मको लागि सोचेर योजना बनाएर काम गर्‍यौं भने धनगढीलाई पक्कै पनि स्मार्टसिटी बनाउने हाम्रो परिकल्पना साकार हुनेछ ।
– तपाईका धेरै योजना रहेछन्, कसरी प्रचारप्रसार गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले जनताको घरदैलोमा गएर यी सबैबारे जानकारी दिइरहेका छौं । हेर्नोस् राष्ट्रका लागि १७ हजार नेपालीले बलिदान दिएका छन् । जनताको यो बलिदान देशको विकास र आर्थिक समृद्धि तथा नागरिकको अधिकार स्थापनाका लागि हो भनेर सम्झाइरहेका छौं । नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता ल्याउन तथा केन्द्रमा रहेको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउन यिनै शहीदहरूको बलिदानले नै सम्भव भएको हो । यसमा नेकपा माओवादी केन्द्रको भूमिका अहम् छ ।
– अन्त्यमा आम मतदातालाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?
म गरिब वर्गको किसानको छोरा हुँ । राजीतिक रूपमा पछि परेका रानाथारू समुदायबाट आएको छु । मलाई पार्टीले मेरो योग्यता र क्षमताको विश्वास गरेर उपमहानरपालिकाको प्रमुख (मेयर) पदको उम्मेदवार बनाएको छ । तपाईंहरूले २०६४ सालमा माओवादी पार्टीलाई विश्वास गरेकाले नै देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । देश अहिले पनि माओवादी पार्टीको एजेण्डामा नै टेकेर यहाँसम्म आइपुगेको छ । त्यसैले फेरि एक पटक माओवादी केन्द्रलाई विश्वास गर्नुहोस् । हामी तपाईंको मतले धनगढीको विकास र समृद्धिको कामलाई अगाडि बढाउने छौं ।